फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको गत चौथो त्रैमाससम्मको नाफा ५७ करोडभन्दा बढी - Aarthiknews
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ५७ करोड ४६ लाख ३६ हजार खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको नाफा १८० दशमलव ७९ प्रतिशत बृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. २० करोड ४६ लाख ५० हजार यो नाफा गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष १८० प्रतिशत बढी रू. ९० करोड २९ लाख ९९ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले सम्भावित जोखिम शिर्षकमा ३० प्रतिशत बढी रू. २७ करोड ७३ लाख ५३ हजार छुट्याएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६२ करोड ५५ लाख १९ हजार रहेको छ । जगेडा कोष रकम अघिल्लो वर्षभन्दा साढे ५६ प्रतिशत बृद्धि भई रू. १ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ८२ हजार कायम भएको छ ।
कम्पनीले अघिल्लो वर्षभन्दा ४५ प्रतिशत बढी रू. ८ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख ७९ हजार कर्जा सापटी लिएको छ भने ३४ दशमलव २० प्रतिशत बढी रू. १५ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख १५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीले १८ दशमलव ६७ प्रतिशत बढी रू. ६ अर्ब ६४ करोड ८७ लाख ९० हजार निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष ३ दशमलव ६७ प्रतिशतमा झरेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ९१ दशमलव ८७ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३०२ दशमलव ५२ रहेको छ ।